किन महिलाहरुले केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा कालो तस्बिर अपलोड गरेका छन त ? — News of The World
संसार न्यूज संवाददातासाउन १७, २०७४
१७ साउन, काठमाडौँ । विगत केही दिन देखि ईन्टरनेटमा फेसबुक महिलालहरुले कालो तस्बिर अपलोड गर्ने कुरा ट्रेन्ड भईरहेको छ । महिलाहरुले आफ्नो फेसबुक, ईन्स्टाग्रांम तथा टुईटरहरुमा कालो तस्बिर अपलोड गरेको दृश्यले जो सुकैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । यस विषयमा विभिन्न ट्रोलहरु समेत बनेका छन् । आखिर किन त ?
कारण भने यस्तो छ द रेड हार्ट क्याम्पेन नामक संस्थाले महिला हिंसाको विरुद्धमा १६ दिने अभियान चलाएको छ । संसार भर महिला हिंसाको कारण वर्षेंनी लाखौँ महिलाहरुले ज्यान गुमाउन परेको उक्त संस्थाले महिला हिंसाको विरुद्धमाअभियान चलाएको हो । महिला हिंसाको कारण ज्यान गरमाएका हजारौ महिलाको आत्म शान्तिको लागि सामाजिक सञ्जालमा ईन्टरनेट हड्ताल स्वरुप कालो तस्बिर अपलोड गर्ने ट्रेन्ड चलेको हो । महिला विनाको अस्तित्व कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराको अवगत गराउन ईन्टरनेटमा यस्तो ट्रेन्ड बन्दै गएको हो ।